Muxuu yahay walaaca ay mucaaradku ka muujiyeen Ra’iisal Wasaare Rooble? – Kalfadhi
“Waxaan rabaa in halkan uga caddeeyo shacabka Soomaaliyeed dowlad goballeedyada,siyaasiinta iyo dhamaan daneeyayaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go’antahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daahfuran iyada oo aan cidna xaqeeda la duudsiin”. Shirka lagu wado inuu dhaco 20-ka bishaan oo saddex cisho naga xigto ayaa isha lagu hayaa waxyaabaha ka soo bixi doona. BBC Somali ayaa markii hore lagu daabacay falanqeyntan.
Maamulka Gobolka Banaadir oo ka shiray amniga doorashooyinka ee caasimadda